अभियानको नाममा करोडौँ खर्चे तर, खुल्ला दिशा मुक्त हुन सकेन सिरहा किन ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 National अभियानको नाममा करोडौँ खर्चे तर, खुल्ला दिशा मुक्त हुन सकेन सिरहा किन ?
अभियानको नाममा करोडौँ खर्चे तर, खुल्ला दिशा मुक्त हुन सकेन सिरहा किन ?
लहान, १७ पुस । जिल्लालाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने अन्तिम दिन थियो, हिजो (३१ डिसेम्बर) । अधिकांश घरधुरीमा चर्पी बनेका छैनन् । तर, ९६ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी बनि सकेको सरकारी तथ्यांक छ । केही दिनयता धमाधम कागजी प्रक्रिया बनाएर जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिका खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा हुँदैछ् ।
सुरक्षा निकायले खुला दिशा गर्ने उपर कडाई गरेका छन् । दर्जनौँ सरकारी निकाय तथा सैकडौँ गैरसरकारी संस्थाहरु यो अभियानमा लागेका छन् । कोठे कार्यक्रम, छलफल, अनुगमन, निरागानी वापत करोडौँ रकम खर्च भइरहेका छन् । अभियानमा सरिक भएका व्यक्तिहरु सैयौँ पटक सम्मानित भइरहेका छन् । दोसल्ला र माला लगाइरहेको छ । तर, तोकिएको समयमा खुल्ला दिशा मुक्त हुन सकेन सिरहा ।
नेवा, युएन हेविटेट, एसएनवी नेपाल, युनिसेफ, वाटर एड लगायतका दाता संस्थाले जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समित (डिवाससिसि)को अनुमतिमा स्थानीय एलजिओ मार्फत करोडौँ रकम खर्च गरेर सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सरकारी निकाय तथा संस्थाहरुले करोडौँ रुपैया खर्च गरेपनि लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुन सकेन् । खुल्ला दिशा मुक्त भएका स्थानहरु पनि पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कागजमा मात्रै खुला दिशा मुक्त भएको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार एनजिओहरुले खाने भाँडो बनाएकोले अभियान सफल हुन सकेन् ।
प्रत्येक वडा स्तरीयदेखि नगर, गाउँपालिका स्तरीय सम्म स्वच्छता समन्वय समिति छ । पत्रकारहरुको पनि जेवाससिसि गठन भएका छन् । डिवाससिसि का रमेश निधिका अनुसार, जिल्लाको एक लाख हजार घरधुरी मध्ये ४४ सय घरधुरीमा मात्रै चर्पी बन्न बाँकी रहेको छ । समयमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषण हुन सकेन । तर, १५र२० दिनभित्र सबै घरधुरीमा चर्पी बनि सक्ने उनले बताए । धेरै मानिसहरुले चर्पी बनाउने समानहरु किनिसकेका छन् । धमाधम चर्पी बनाउने काम भइरहेको उनले सुनाए ।
सुरु सुरुमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने गाविसलाई डिवाससिसिले २५ हजारका दरले रकम दिने गरेका थिए । पछि पनि ५० वटा गाविसलाई खानेपानी वापतको रकम १८र१९ हजारको दरले दिएका छन् ।
एनजिओको अपारदर्शी खर्च
सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गाउँ गाउँमा गरेको एनजिओहरुले दावी गरेका छन् । तर, कति रकम खर्च गरेका छ । त्यो कार्यक्रमको लागि त्यो सार्वजानिक गर्न सकेको छैन् । जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समित (डिवाससिसि)का रमेश निधिले भने, एनजिओले थुप्रै रकम खर्च गरेको सुनिएको छ । तर, उनीहरुको खर्चको हिसाब किताब डिवासिसिलाई जानकारी मा नरहेको उनले बताए ।
यतिका रकम खर्च गर्नुको साथै गारिब वस्तीमा सार्वजानिक शौचालय निर्माण, गरिबलाई शौचालयको सामग्री सहयोग गर्दा हुँदैन् ? भन्ने प्रश्नमा रेडक्रसका सभापति राजदेव यादवले भने, सरकारको नियम अनुसार नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । रेडक्रस पनि खुल्ला दिशा मुक्त अभियानमा लागेका छन् ।
जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरेका छन् । उनीहरु बीच सम्मान कसरी गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिएका छन् । धनगढीमाई नगरपालिकाले सम्मान गर्दा दोसल्ला ओढाएका थिए भने गोलबजार नगरपालिका सम्मान गर्दा मिथिलाको पाग भनेर विवाहमा दुलहाले लगाउने मौर
(स्थानीय भाषामा)ले सम्मान गरे ।
खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने दिन गर्ने सभाको लागि गरिने खर्चमा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयवासीहरु ले दावी गरेका छन् ।